Agoda – Hotel Booking Deals 6.36.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.36.0 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား ခရီးသြားျခင္း & ေဒသဆိုင္ရာ Agoda – Hotel Booking Deals
Agoda – Hotel Booking Deals ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘ်ဆိုဒ်ထက်တောင်မှနိမ့်စျေးနှုန်းတွေ! အဆိုပါ Agoda app ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာအတွက်နေရာထိုင်ခင်းမဆိုကြင်နာအပေါ်အလွန်အကောင်းဆုံးအပေးအယူရှာဖွေမတွေ့ရှိခြင်းနှင့် booking အဘို့သင့်ကိုအကောင်းဆုံးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
- * Shop * ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်မပြနိုင်အပေးအယူကိုကြည့်ပါ။ Agoda ကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအာမခံနှင့်သင် app ကိုအပေါ်ရှုမြင်သည့်အခါကပင်ပိုကောင်းရရှိနိုင်သည်။
- * အတွင်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်မှတက်မှ 80% ၏အပိုဆောင်းငွေစု, နောက်ဆုံး-Minute အရောင်းဝယ်မှုများ, လျှို့ဝှက်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်နှင့်ထို့ထက် ပို. Get * သိမ်းဆည်းပါ။
- * DISCOVER * 1,900,000+ ဟိုတယ်များ, Villas, BnBs နှင့်ရွေးချယ်မှုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်ငွေကြေးအားလပ်ရက်ငှားရမ်းမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုမျိုးကျော်ကိုရှာပါ။
- * အမြော်အမြင်ရှိရှိ Choose * ဆုံးဖြတ်။ Agoda ရဲ့အသုံးဝင်ရှာဖွေရေး filter များ, Hi-res ဓါတ်ပုံများ, မြေပုံအမြင်များ, ဒေသခံအတွေ့အကြုံကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့် 15+ သန်းမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခရီးသွားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသင်သည်သင်၏တိကျတဲ့ခရီးနှင့်ဘတ်ဂျက်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောနေရာထိုင်ခင်းကိုကူညီရှာဖွေ။
- * NO ဖိစီး * ထောက်ခံမှုရယူပါ။ Agoda ရဲ့ app ကို, သင့်ဘောက်ချာကယ်တင်အသေးစိတ်နှင့်လွယ်ကူသော check-in များနှင့်ပရင်တာ-အခမဲ့ခရီးသွားလာမှုအတွက်ညာဘက်သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်မြေပုံ။ သငျသညျအချိန်မရွေး, နေရာမရွေးသင့်ရဲ့ဘွတ်ကင်စီမံခန့်ခွဲသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေတတ်လျှင်, Agoda သင့်ရဲ့ခရီးကကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့ချောမွေ့ဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်ဘာသာစကားမျိုးစုံအတွက် 24/7 တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအေးဂျင့်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
- * သည် START င်ငွေ * ဟာ host ဖြစ်လာနှင့်ဝင်ငွေကိုစတင်ပါ။ Agoda နေအိမ်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုသင်သံသယစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုပေးနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသေးသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းမကြလျှင်, ယနေ့ agoda.com/homes သွားပါ။ ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!
ရေရှည်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းမှအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောဇိမ်ခံ, နောက်ဆုံးမိနစ်မှဘတ်ဂျက်ချွေတာခြင်း, အလွန်အမင်း-rated Agoda app ကိုသင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်ခရီးသွားအဖော်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Agoda app အားသင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်ဖွင့်:
- သိုလှောင်သုံးစွဲနိုင်: သင်၏ device ကိုရန်သင့်ဘွတ်ကင်ဘောက်ချာကိုကယ်တင်ရန်။
- သင်၏တည်နေရာ: သင်အနီးဂုဏ်သတ္တိများကိုကူညီရှာဖွေရန်။
- သင်၏ပြက္ခဒိန်: အချိန်မီသတိပေးချက်များအဘို့သင့်ပြက္ခဒိန် booking ရက်စွဲများကိုကယ်တင်ရန်။
- သင်၏အဆက်အသွယ်: သင်အလွယ်တကူသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူလက်ဆောင်ပေးမယ် Card များကိုဝေမျှပါစေရန်။
- သင်၏ကင်မရာ: သင်လွယ်ကူသော input ကို (optional) အဘို့သင့်ခရက်ဒစ်ကဒ် scan ခွင့်ပြုရန်။
အကျိုးစီးပွားအခြေပြုကြော်ငြာနှင့် Cross-device ကိုခြေရာခံဘို့အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ App ကိုများတွင်အသုံးပြုသည့်ကိရိယာသတင်းအချက်အလက်, အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, သင်ရှိစေခြင်းငှါအချို့ဘေးဖယ်ထုတ်ရွေးချယ်မှုလေ့ကျင့်ခန်း, ငါတို့ cookie ကိုမူဝါဒကကြည့်ရှုပါ။
Agoda – Hotel Booking Deals အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Agoda – Hotel Booking Deals အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Agoda – Hotel Booking Deals အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Agoda – Hotel Booking Deals အား အခ်က္ျပပါ
denergod စတိုး 13.35k 2.9M
Agoda – Hotel Booking Deals ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Agoda – Hotel Booking Deals အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.36.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.agoda.com/info/agoda_privacy.html
App Name: Agoda – Hotel Booking Deals
Release date: 2018-09-19 06:52:32
လက်မှတ် SHA1: 44:38:57:BE:6E:AA:DF:59:DD:FF:58:A3:39:8E:BC:A4:E7:C8:23:7D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): agoda service
အဖွဲ့အစည်း (O): agoda
နယ်မြေ (L): bangkok
နိုင်ငံ (C): TH
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): bangkok
Agoda – Hotel Booking Deals APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ